Ngaba ufuna igqwetha lokuqokelela? Unxibelelwano Law & More
Ukuqokelela amatyala kunye nokuqhotyoshelwa kweeasethi eNetherlands
Uphando lubonisa ukuba iipesenti ezingama-30 zokungabinamali kwiNetherlands zibangelwa zii-invoice ezingabhatalwanga. Ngaba inkampani yakho inamakhasimende angakahlawulwa? Okanye ngaba ungumntu ozimeleyo kwaye unamatyala awakutyala imali? Emva koko nxibelelana ne Law & More amagqwetha okuqokelela amatyala.
QAPHELA IINGOZI ZOKUTHENGA?
Umthetho wokuqokelela amatyala
Uphando lubonisa ukuba iipesenti ezingama-30 zokungabinamali kwiNetherlands zibangelwa zii-invoice ezingabhatalwanga. Ngaba inkampani yakho inamakhasimende angakahlawulwa? Okanye ngaba ungumntu ozimeleyo kwaye unamatyala awakutyala imali? Emva koko nxibelelana ne Law & More amagqwetha okuqokelela amatyala. Siyaqonda ukuba ii-invoice ezingabhatalwanga ziyacaphukisa kwaye azibalulekanga, yiyo loo nto sininceda ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni kwenkqubo yokuqokelela. Amagqwetha ethu okuqokelela amatyala anokuhamba ngenkqubo yokuqokelelwa kwejaji yomthetho kunye nenkqubo yokuqokelelwa komthetho nawe. Law & More Ukwazi nomthetho wokuncamathiselwa kwaye unokukunceda kwimeko yokubhanga. Okokugqibela, akwenzi mahluko kuthi ukuba umtyali uhlala eNetherlands okanye usekwe kwilizwe langaphandle. Ngenxa yemvelaphi yethu yamanye amazwe, silungele amabango antsonkothileyo, aphikisanayo okanye amakhulu.
> Indlela ye-arhente yokuqokelelwa kwamatyala
> Amanqanaba enkqubo yokuqokelela
Xa kuziwa ekuqokeleleni amatyala, ucinga ukuba ucinga ngearhente yokuqokelelwa kwamatyala okanye ibheyile kunommeli wokuqokelela ityala. Kungenxa yokuba omathathu amaqela ayakwazi ukuqokelela amatyala angahlawulwanga. Nangona kunjalo, kukho amanyathelo afanelekileyo kwinkqubo yokuqokelelwa kwezinto anokuthi aqulathwe ngugqwetha lokuqokelelwa kwamatyala:
• Ligqwetha lokuqokelelwa kwamatyala kuphela eligunyazisiweyo ukuba liqhube iinkqubo zomthetho ngamabango ngaphezulu kwe- € 25.000,00.
• Ugunyaziswe ukuba kuthathwe ipropathi kunye nengeniso yomntu onamatyala
• Ligqwetha lokuqokelelwa kwamatyala kuphela eligunyazisiweyo ukuba lifake uxwebhu lwezamatyala olukungabinamali.
• Ligqwetha lokuqokelelwa kwamatyala kuphela eligunyazisiweyo ukuba liphathe amatyala okuqokelelwa kwamatyala kumazwe aphesheya.
• Ukufanelekela ukusombulula iimbambano zomthetho. Igqwetha lokuqokelela amatyala lilungile ngakumbi ukunika izisombululo ezenziwe ngokwezifiso nokuvavanya nokuphinda ukhusele.
Kwenzeka rhoqo ukuba ngexesha lenkqubo yokuqokelelwa, kusafuneka ukutshintsha ukusuka kwiarhente yokuqokelela okanye ibheyile Kwimeko enjalo kuya kuba lula kwaye kulungelelaniswe ngakumbi ukuba kwindawo enye kunye nangokuzimanyayo kwangoko, apho sele usaziwa kwaye nefayile sele yakhelwe wena.
Amanyathelo amane okuqokelela ngasekunene
Iinkcukacha zoqhagamshelwano Law & More
Ngaba ujongene nomthengi ongabhataliyo? Unxibelelwano Law & More
Sicela umntu onetyala ukuba ahlawule ngesaziso sokusilela
Silungiselela uthethathethwano ukwenzela ukuba umtyali ahlawule okanye enze amalungiselelo entlawulo
Siqala inkqubo yezomthetho kwaye sithathe ipropathi ukuba kukho imfuneko
Ngexesha ekuvunyelwene ngalo. ”
Indlela ye-arhente yokuqokelelwa kwamatyala
Kwinkqubo nganye yokuqokelela, inani lamanyathelo kufuneka athatyathwe. Inyathelo lokuqala kukwazisa lowo unetyala ukuba akaphumeleli uxanduva lokuhlawula. Oku kungenxa yokuba kufuneka umnike ithuba lokuhlawula ngaphakathi kwexesha elifanelekileyo ngaphandle kweendleko ezingaphezulu. Kufuneka uthumele umntu okweletayo ngesikhumbuzo esibhaliweyo malunga noku. Esi sikhumbuzo sibizwa ngokuba sisaziso sokungasasebenzi Ixesha leentsuku ezilishumi elinane lihlala lithathwa njengexesha elifanelekileyo apho umtyali acelwe ukuba ahlawule ibango. Kunjalo, Law & MoreAbameli banokuqulunqa isaziso sokungagqibeki kuwe.
Ukuba akukho saziso sokungaphumeleli sithunyelwe, ijaji iyakwala naliphi na ibango ngomonakalo. Nangona kunjalo, kukho iimeko apho kungekho mfuneko ukuthumela isaziso sokungagqibeki, umzekelo ukuthotyelwa kwesivumelwano akunakwenzeka ngokusisigxina. Nangona kunjalo, kucetyiswa ukuba usoloko uthumela isaziso sokungagqibeki njengenqaku lokulumkisa. Ukuba isicelo sentlawulo asihambelani, sinokuqalisa inkqubo yokuqokelela.
Amanqanaba enkqubo yokuqokelela
Kukho izigaba ezibini ezinokubakho kwinkqubo yokuqokelela: inqanaba lokuthula, ekwabizwa ngokuba yinqanaba lokugweba, kunye nenqanaba lokugweba ..
Ukuba ubudlelwane phakathi kwamaqela kulungile, kuyacetyiswa ukuba uqale ngokudlulela kwinqanaba lokuthula. Kweli nqanaba, sizama ukukhuthaza umtyali ukuba ahlawule ngendlela yezikhumbuzo ezibhaliweyo kunye nonxibelelwano ngomnxeba. Kungenzeka ukuba ezi ngxoxo kunye nothethathethwano zingakhokelela kwilungiselelo lokuhlawula. Sicebisa ukuba ilungiselelo lokuhlawula libekwe phantsi. Amagqwetha ethu okuqokelela amatyala anokukhathalela oku. Inzuzo yesigaba esisebenzayo kukuba ubudlelwane phakathi kwamaqela buhlala bungonakalanga kwaye akukho zindleko zetyala lomthetho zibaliwe.
Ukuba inqanaba lokuthula alikwazi ukugqitywa ngentlawulo ngulowo unetyala okanye ngolungiselelo lwentlawulo, iinkqubo zomthetho zinokuqaliswa. Kuyakwazi ukutsiba kwinqanaba lokuncoma kwaye uqale iinkqubo zomthetho kwangoko. Kwinqanaba lezomthetho, sibanga intlawulo yemali engekahlawulwa kunye neendleko zokuqokelelwa phambi kwenkundla. Phambi kokuba kuqale amanyathelo asemthethweni, kungabanjwa impahla yakhe onetyala. Oku kubizwa ngokuba kukuxhuzula. Ukuncamatheliswa komgwebo kwenzelwe ukuqinisekisa ukuba umntu onetyala akakwazi ukuhambisa ipropathi ngaphambi kokuba inkundla igwebe, ukuze ukwazi ukubuyisa iindleko zakho kulowo unetyala. Ukuba ijaji ikwabela ibango lakho, ukunamathela kokukhuselwa kuya kuguqulwa kube yinto enyanzelekileyo. Oku kuthetha ukuba ii-asethi eziqhotyoshelweyo zingathengiswa ngebheyile esidlangalaleni ukuba umntu obolekayo akakabhatali. Ingeniso yezi asethi iya kusetyenziselwa ukuhlawula ibango lakho. Law & MoreAbameli bokuqokelela amatyala banamava kwicandelo lomthetho wokuncamathisela kwaye bayonwabile ukukunceda ngexesha leenkqubo zomthetho.
Law & More ikwabonelela ngenkxaso yokuthintela umngcipheko onxulumene nentlawulo kunye nokuhlawula kade. Umzekelo, sicebisa abathengi ukuba babandakanye kwimibandela yabo eqhelekileyo kunye neemeko zokuhlawula ezinokuthintela ukungahambelani kwimeko yokuhlawula kade. Ngaba ungathanda ulwazi olungakumbi malunga noku? Nceda unxibelelane nabameli bokuqokelela amatyala Law & More.